A Man, near your house: February 2016
A Man, near your house
မြန်မာ Blogger များ
Posted On Monday, February 8, 2016 at by Htet Aung
ကျွန်တော် သိသလောက် နဲ့ ခံစားမိသလောက် နိုင်ငံ အရေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ Review တွေကို ကျွန်တော် စိတ်ကုန်မိနေပါပြီ။ ဖတ်လိုက်မိတဲ့ Review တွေဆိုတာလဲ မနည်းပါဘူး။ တချို့ Review တွေကလည်း ရှင်းကနဲ လင်းကနဲ ဖြစ်သွားအောင်ကို ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ဖို့တော်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရုံနဲ့ ပြောနေရုံနဲ့တော့ အဆင်ပြေပါ့မလား စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့တင် သိသာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ကြရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုတာ ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စိတ်စေတနာ အပြည့်ရှိကြတဲ့ Blogger တွေ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ရသလောက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေဟာ
၁။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သတင်းများကို DVB, VOA, BBC, Mizzama, Hit Taing, Irrawaddy, Moemacha အစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ
၂။ မြန်မာပြည်အကြောင်း ဖတ်ပြီး တောက်ခေါက်မယ်၊ ဒေါသထွက်မယ်၊ ဒီခွေးသူခိုးတွေ (နအဖ နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါ) လို့
၃။ အဲဒီနောက်မှာ ဒီသတင်းတွေနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အရာတွေကို နာမည်ကြီး Blogger တွေ ဆီမှာ ဖတ်ကြမယ်။
၄။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ့်မှာ Blog ရှိတဲ့သူဆိုပါလျှင် ကိုယ့် Blog မှာ ရေးကြမယ်။
ကျွန်တော်တို့ အများစု ဒီအတိုင်းလုပ်နေကြတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မပြောပဲ သိနေကြလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံတကာမှာ လှုပ်ရှားဖို့ အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ စာအုပ် အနီလေးရဲ့ မျက်နှာကို ပြန်ပြန်ကြည့်နေရလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဒီအစိုးရ မတရားဘူးဆိုတာကို လူတိုင်းသိပါတယ်။ အစိုးရဖက်က လူတွေရော ပညာတတ်တွေရော မြန်မာပြည်သား မှန်သမျှ သိပါတယ်။
“ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ မသိဘူး၊ ဒီအစိုးရကတော့ တော်တော် တရားလွန်နေပြီ”
“ဘာမှ သွားလုပ်မနေပါနဲ့ကွာ ဒီအစိုးရက ဒီအတိုင်းဆို ပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူး”
“မြန်မာပြည်ကလူတွေက အေးဆေးပဲ ကိုရီးယားကား တောင် အကြည့်မပျက်ဘူး။ ဒီလူတွေနဲ့တော့ မဖြစ်ပါဘူး”
“မင်း မြန်မာပြည် ပြန်ချင်သေးတယ်ဆို အေးအေး နေပါကွာ”
“မင်း ဟိုရောက်ရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်နဲ့နော်”
“နိုင်ငံရေး အကြောင်းတွေ မပြောပါနဲ့”
ဒီလိုမျိုးစကားတွေ ပြောနေမဲ့အစား ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခု လုပ်ကြရအောင်...
ဘာလုပ်ကြသင့်သလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောရလောက်အောင်လဲ အသိဥာဏ်မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖယ်ပြီး ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ကြရအောင်။ အဲတော့ ပထမဆုံး မဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဖယ်ကြည့်ရအောင်...
၁။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ဆန္ဒပြကြမလား.... (ရှင်းပါတယ်၊ မလုပ်နိုင်ပါဘူး)
၂။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထွက်ပြီး မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကို ဇောက်ချလုပ်ကြမလား.... (မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)
၃။ ကျွန်တော်တို့ လက်နက်ကိုင်ပြီး မြန်မာပြည် နယ်စပ်ကနေစတိုက်မလား (မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)
၄။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေ အစိုးရကို ပေးအောင်လုပ်ပြီး အစိုးရပြုတ်ကျအောင် ကြံစည်ကြမလား...
(ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး ပြောကြည့်ပါရစေ။ ဒီကိစ္စက ဖြစ်နိုင်သလိုလို ရှိပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေက.. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို ကူညီမယ့် သူဆိုတာ
- အမေရိကန် (ဝေးလွန်းပါတယ်၊ တရုတ်နဲ့လဲ ရန်မဖြစ်လိုဟု ယူဆပါတယ်။ ဥပမာ အိုလံပစ်ကို ပါးစပ်နဲ့သာ သပိတ်မှောက်ပါတယ်)
- အင်္ဂလန် (ကျွန်တော်သိသလောက် ပါဝင်မှုနည်းပါတယ်)
- တရုတ် (သူ့အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိတဲ့ (ပင်လယ်ထွက်ပေါက်၊ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၊ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်
- အာစီယံ (စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ပညာရှင်အလုပ်သမားပမာဏရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို မြန်မာပြည်မှ ပညာတတ်များထံမှ သက်သက်သာသာ
ရပါတယ်၊ မလေးရှား နိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုး အများစု ရှိကြပါတယ်။ ထိုင်း စိတ်မချရသော မိတ်ဆွေပါ။ အင်ဒိုနီးရှား သိပ်မကွာလှပါ။)
- UN (ကျွန်တော်သိသလောက် UN တပ်များ မြန်မာပြည် တွင် လူ ၁သန်းလောက် သေဆုံးလျှင်တော့ ရောက်မလား မသိ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်တာတွေ စာရင်းထုတ်ကြည့်လိုက်ပါက ထိုအတိုင်းပင်တွေ့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အခြေအနေ အမှန်မှာ ၄င်းအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်သည်များကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်
ကျွန်တော်တို့တွင် အထိုက်အလျောက်သော ငွေကြေး တတ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တွင် နည်းပညာ ရှိပါသည်၊ လေ့လာခွင့်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာနှင့် ပါတ်သက်သော ဗဟုသုတ ရှိပါသည်။
ထိုအရာများကို အသုံးချ၍ အကျိုးရှိဆုံး ဖြစ်စေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားသင့်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး လူများကို စီစစ်ဖို့ လိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Blogger များထဲတွင် စစ်အစိုးရ ဘက်တော်သားများ မပါပဲ စကားပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ရန် ကြံစည်သင့်ပေသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဦးဆောင်၍ ဖိုရမ် တစ်ခု တည်ထောင်ကာ မြန်မာပြည်အရေးကို ဆွေးနွေးနိုင်ပေသည်။
(ဆွေးနွေးရာတွင် အဖြေထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးကြပါမည်)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အဖွဲအစည်းများ အားလုံးကြားတွင် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်လုံခြုံချောမွေ့စေရန် ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား များစွာ ပြည်ပတွင် ရှိပါသည်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူများက တတ်နိုင်သလောက် စုစည်း ကြမည်ဆိုလျှင် ဥပမာအားဖြင့် လူတစ်ယောက်လျှင် US$ 50 လစဉ် မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် စုဆောင်းထားသည် ဆိုပါစို့ တစ်နှစ်ကြာလျှင် US$ 600 ရပေမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်သိန်းမျှ ညီညွတ်စွာ လုပ်နိုင်လျှင် US$ သိန်း၆၀၀ ရပေမည့်။ အနည်းဆုံးထိုပိုက်ဆံဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအလုပ်များကို စိတ်ကူးသက်သက်မဟုတ် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သည့် အခြေအနေများ ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွင် ရှိပါသည်။
ထို့အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ
၁။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ချက်ရှိရပါမည်။
(မတရားသော သူမှန်သမျှ မတည်မြဲသည်မှာ သဘာဝဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှ မယုံကြည်လျှင် နေပါ၊ ကျွန်တော် ဒီအစိုးရ ပြုတ်ကျရမည်ဟု ရင်ထဲ အသည်းထဲမှ ယုံကြည်ပါသည်။)
၂။ ကျွန်တော်တို့ ဇွဲရှိရပါမည်။ စစ်အစိုးရ ပြုတ်မလားမသိဘူး ဟူ၍ လုပ်ကြည့်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ။ မပြုတ်ပြုတ်အောင် လုပ်ပါမည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ ဟုန်းကနဲထတောက်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပါ ကျွန်တော်တို့ လူနည်းစုမှ စတင်၍ နောက်ပိုင်းပြန့်ပွားလာအောင်
ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားအကောင်အထည် ဖော်ကြရအောင်လားဗျာ......
ကျွန်တော့် Blog ကိုလာရောက်ကြသူများ...အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါသည်။
ဒါနဲ့ ဒီ Blog ရဲ့ မူရင်း ဒီဇိုင်နာ ကတော့ Steven Wittens and Stefan Nagtegaal. တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ http://acko.net/ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
I am getting in touch with Computer around 1996 while I study for Diploma in Computer Studies (DCS) in Informatic Computer Center, Yangon. I haveachance to start working in own business before my 18th birthday, my Dad let me lead the DTP (Desktop Publishing ) shop Htin Shar with the help of my friend and my uncle. Sometime Lazy, bad in English, currently working and learning in Orgnima with the help of my colleague.